Ukususwa ohlwini lwabamnyama beComcast | Martech Zone
Ukususwa ohlwini lwabamnyama beComcast
ULwesihlanu, July 18, 2008 NgoLwesihlanu, January 11, 2013 Douglas Karr
Uma uthumela i-imeyili eningi kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lokumaketha nge-imeyili, udinga ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho ligunyazwa abahlinzeki abakhulu be-Intanethi. Ngike ngabhala ngaphambilini ngokugunyaza nge I-AOL futhi Yahoo! Namuhla sithole ukuthi kungahle kube nenkinga lapho isiza sethu singavinjelwa khona I-Comcast. IComcast inayo eminye imininingwane ukutshela ukuthi bavimba i-imeyili yakho noma cha.
Ngibhalile esikhathini esedlule yiziphi izinyathelo Ngifunde ukuqinisekisa ukuthi indawo yethu igcina idumela elihle, kepha kusenokwenzeka ukuthi ube nayo izingqinamba zokulethwa kwe-imeyili noma ungenacala.
Ummeleli ovela kuComcast ungikhiphele i-imeyili enesixhumanisi Ifomu Lokucela Umhlinzeki Ovinjiwe likaComcast. Ngikugcwalise konke, ngethemba, lokhu kuxazulula izingqinamba esizihlangabeze izolo ebusuku lapho umsebenzisi engakwazanga ukuthola ukufinyelela kuhlelo lwethu lokusebenza.
Ngifunde amaphupho amabi ambalwa online mayelana nokuvinjelwa kwe-DNS kaComcast. Sincoma abasebenzisi ukuthi basebenzise I-OpenDNS esikhashana.
Tags: uhlu lwabantu abamnyamai-comcastimeyiliuhlu lokuvimbela i-imeyili
Izindlela Ezi-5 Ezilula Zokuthuthukisa Ukufundeka Kwesiza Sakho